Mpanamboatra sy mpamatsy fanamiana fitafiana fitondra miasa | qiangwei
1. Safidio ny lamba polyester / landihazo mahafinaritra, izay tsy mora ampidirina am-pandehanana, azo entina, mahazaka ary azo sasana, lamba ahazoana aina sy fofonaina, fanesorana ny hamandoana ary fanesorana ny hatsembohana.
2. Ny famolavolana lapel tsy manam-paharoa dia manasongadina ny fironana lamaody, ary ny zipper flap eo anoloana dia malama sy mora entina; Ny famolavolana loko mifanohitra amin'ny ivelany ivelany dia mampamirapiratra sy mamirapiratra ny akanjo manontolo. Paosy lehibe eo amin'ny lafiny roa amin'ny tratra, manjaitra kofehy misokatra, tsara tarehy sy malala-tanana, mora entina amin'ny karazan-fitaovana rehetra amin'ny asa, ny endrika tsotra sy mahia dia misy karazana endrika sy endrika rehetra amin'ny vatana.
3. Kitapo tanany havia, mora ampidirina penina, tsotra sy azo ampiharina.
4. Ny zaitra dia manana zaitra mafy sy akaiky, ary tsy mora ny manapaka sy manokatra ny valiny. Ny cuff sy ny hem dia ahitsy ary hamafisina amin'ny bokotra marefo sy tsotra, izay mety sy azo ampiharina.
5. Ny lafiny anoloana an'ny pataloha dia misy kitapo slanting, ary ny lafiny aoriana dia entina mivoaka hanamorana ny fitehirizana; Crotch zaitra, tsy mora rovitra.
6. Ity karazan'akanjo fiasa ity dia afaka manome ny ilain'ny karazana asa samihafa. Ny fanaovana hosodoko 3D dia afaka manampy amin'ny fanitarana ny fampiratiana sy ny zavatra takiana amin'ny asa, ary mahatonga ny mpitafy tsy hanana fahalalahana hanome izay ilain'ny sokajim-piainana rehetra.
7. Tohano ny fomba namboarina sy ny logo an'ny orinasa hanatsarana ny sarin'ny orinasa.
8. Raha manana santionany ny mpanjifa dia afaka manao arakaraka ny santionan'ny mpanjifa isika, raha tsy manana santionany ny mpanjifa dia afaka mamolavola mifanaraka amin'ny hevitry ny mpanjifa isika, na ny mpanjifa dia afaka misafidy ny santionan'ny orinasa.
Mety amin'ny indostria maivana, indostrian'ny famokarana, indostrian'ny fanorenana, indostria haingon-trano, entana entana, lozisialy fikolokoloana fiara ary tontolo iainana indostrialy.
Teo aloha: Akanjo fandidiana
Manaraka: Akanjo porofon'ny masoandro
Akanjo ivelany amin'ny Mens
Fitaovana akanjo ivelany
Akanjo fanatanjahan-tena eny ivelany
Mitokana akanjo ambaratonga 1
Mitokana akanjo 2
Hoditra no akanjo